Liverpool Oo Ugu Danbayn Tubta Guusha Ku Soo Laabtay, Xidigaha Muhiimka Ah Ee Soo Laabtay Iyo Diyaar Garowga Kulanka Man City. - Gool24.Net
Liverpool Oo Ugu Danbayn Tubta Guusha Ku Soo Laabtay, Xidigaha Muhiimka Ah Ee Soo Laabtay Iyo Diyaar Garowga Kulanka Man City.
Liverpool ayaa tubta guusha ku soo laabtay kadib markii ay guul 3-1 ah ka gaadhay kooxda Lyon oo gool rekoodhe ahaa kaga hor martay. Kooxda Jurgen Klopp ayaa ka soo kabsatay gool uu qaladkiisa lahaa Alisson Becker si ay isugu diyaariyaan kulanka finalka Community Shield ee Man City.
Kooxda Jurgen Klopp ee Liverpool ayay muhiimad wayn u lahayd in ay tubta guusha ku soo laabtaan kadib markii ay hore u soo guulaysan waayeen afartii kulan saaxiibtinimo ee ugu danbeeyay iyada oo hadda uu si rasmi ah u soo dhamaaday diyaar garowgii Liverpool ee kulamada saaxiibtinimo.
Liverpool waxaa guushan ku hogaamiyay Roberto Firmino iyo da’yarka Harry Wilson oo gool layaableh dhaliyay halka goolka kale uu ahaa mid iska dhalis ah balse Reds waxay ka soo kabsatay gool rekoodhe ahaa oo uu Depay dhaliyay bilawgii ciyaarta.
Jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa markii ugu horaysay fursad u helay in ay daawaadaan xidigaha kooxdooda ugu muhiimsan oo fasixii xagaaga ka soo laabtay inkasta oo ayna wada helin fursad ay kulanka Manchester City diyaar buuxa ugu noqon karaan.
Shaxdii Liverpool Ee Qaybtii Hore ee Ciyaarta:
Jurgen Klopp ayaa shaxdiisa ku soo wada bilaabay Alisson, Naby Keita, Shaqiri, Mohamed Salah iyo Roberto Firmino kuwaas oo dhamaantood ka maqnaa kulamadii hore ee la soo ciyaaray.
Liverpool XI: Alisson, Hoever, Gomez, Lovren, Larouci, Keita, Shaqiri, Lallana, Wilson, Salah, Firmino.
Kaydka: Mignolet, Lonergan, Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Milner, Henderson, Ox, Brewster, Robertson, Origi, Matip, Lewis, Duncan, Alexander-Arnold, Elliott, Van den Berg.
Laakiin kooxda Lyon ayaa isla daqiiqadii 4 aad ee bilawgii ciyaarta waxay goolka furitaanka ku heleen rekoodhe uu qaladkiisa lahaa Alisson iyada oo Depay uu kooxdiisa Lyon goolkan u saxiixay.
Markiiba Liverpool ayaa jawaab adag bixisay laakiin kubbad ay Firmino iyo Wilson iska kaashadeen ayuu da’yarka Wilson birta ku garaacay.
Roberto Firmino ayaa goolka barbaraha kooxdiisa Liverpool u keenay daqiiqadii 17 aad isaga oo muujiyay sida uu saamayn wayn u yeelan karo isaga oo xataa isla hadda uun fasaxa xagaaga ka soo laabtay wuxuuna Firmino ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah.
Daqiiqadii 22 aad Liverpool ayaa dhinaca kale u dhigtay natiijada ciyaarta goolka looga hormaray kadib markii uu difaaca kooxda Lyon ee Andersen uu qaab maad ah isakaga dhaliyay goolkan waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Reds hogaanka kula wareegtay.
Qaybtii hore ee ciyaarta oo ay Liverpool dadaalo badan samaysay ayaa lagu kala nastay 2-1 ay Reds hogaanka ciyaarta ku haysay.
Daqiiqadii 53 aad ee qaybtii labaad ee ciyaarta da’yarka Liverpool ee Harry Wilson ayaa gool heer caalami ah ku niyadjabiyay kooxda Lyon kadib markii uu Bobby Duncan kubbada kaga helay meel 25 yards u jirtay goolka Lyon, laakiin Wilson ayaa darbo aan la rumaysan karin waxa uu kaga yaabsaday goolhayaha Lyon kaas oo aan wax badbaadin ah samayn.
Harry Wilson ayaa isku muujinaya Jurgen Klopp si uu xili ciyaareedka cusub qayb uga noqdo qorshihiisa halka Liverpool lacag fiican ku iibin karto kadib qaab ciyaareedka fiican ee uu isku muujinayo.
Jurgen Klopp ayaa isbadalo aad u badan ku sameeyay shaxdii uu qaybtii hore ku soo shirtagay laakiin waxa uu ugu danbayn Klopp badalay ciyaartoy kasta oo shaxdiisa ku soo bilawday qaybtii hore.
Mohamed Salah, Naby Keita, Shaqiri iyo Alisson ayay dhamaantood muhiim u ahayd in ay daqiiqadihii ugu horeeyay ee xagaagan ay ciyaareen si ay xili ciyaareedka cusub iskugu diyaariyaan.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-1 ay Liverpool guul kaga gaadhay kooxda Lyon oo gool kaga hor martay, waxayna guushani maskax ahaan u xoojinaysaa diyaar garowga ay kooxda Jurgen Klopp ugu jirto finalka Community Sheild ee Man City iyo waliba bilawga xili ciyaareedka cusub ee Premier League.
Liverpool ayaa hadda si buuxda diirada u saari doonta kulanka axada ee finalka Community Sheild oo ay Wembley Stadium kula ciyaari doonaan kooxda Manchester City.